New Brighton isiXhosa – MBDA Surveys
Emva kwenkqubo yokunyuswa komgangatho eSingaphi, ukwakhiwa kwedama lokudada nomiso lomnyadala womculo wejazz, iNew Brighton Jazz Festival, IMBDA ifuna ukudala iziko lenkcubeko ngaphakathi kweNew Brighton. Kukho ukhetho lweenkqubo zongenelelo ezichongiweyo. Ezi nkqubo zijongene nezenkcubeko, ilifa lemveli, ukhenketho, ezoluntu, uphuhliso lwezoqoqosho kwakunye nokudalwa kwemisebenzi. Ezi nkqubo zijonge kakhulu kwindaba zolutsha nopuhliswa kwalo.
Lo mvavanyi-mibono ufuna ukwazi imibono yakho ngesixeko saseNew Brighton – ukuba uziva njani nalendawo, ngawaphi amathuba ophuhliso akhoyo, yintoni efuna ukulungiswa okanye yenziwe ngcono, kwakunye zeziphi iiprojekthi ezinokuqulunqwa apha. Iimpendulo zakho zizakunceda, zichaphazelele
inkqubo zeMBDA apha kule ngingqi.
Lo mvavanyi-mibono awuzi kuthatha ixesha elingapha kwewemzizu emihlanu. Ngaphezu koko, zonke
iimpendulo zakho zizakugcinwa ZIYIMFIHLO ZINGENAMNINI-YO.
Isini	Indoda	mfazi
Ndihlala kufutshane kwase...
Ndihlala kufutshane kwase...	Deal Party / Cradle Road	Ferguson Road	Gunguluza / Avenue A / Singapi Road	Mahambehlala Road	Moduka Road	Njoli / Norongo Road	Ntshekisa Road	Sidwell Road	I am a former resident of New Brighton
1.) Kule idwelisiweyo, yeyiphi indlela echaza imiva yakho ngenkqubela-phambili yaseNew Brighton? *
Khetha ibenye	Okukakhulu, uphuliso luyabonakala apha kule ngingqi	Iyazama kodwa uphuhliso luza kade	Akukho not yenzekayo (yonke into ime ngxi)	Yonke into ibuyela umva (kuyonakala)
2.) Kula angezantsi, ngawaphi amagama ongawasebenzisa ukuchaza iNew Brighton [Unga khetha abe mahlanu] *
Yeyona ndawo inekcubeko apha eBhayi
Yindawo enikisa umdla
Yindawo yokuzisa abahlobo nonwabe
Ingayindawo ekutyelelwa kuyo
Yindawo enemoto ezinintsi (kuxinenene)
3.) Kule idewelisiweyo khetha ibe mithathu imiba enijongene nayo eNew Brighton? *
Akukho nkxaso ivela kurhulumente
Ungabikho kwamathuba nemisebenzi
Ezinye (sicela ucacise imibono yakho)
4.) Zeziphi iprojekhti ongathanda ukuzibona ziqalwa [Ungakhetha zibe ntathu] eNew Brighton? *
Ulwakhiwo (uphuliso lwendlela, iipevumente)
Ukuphuliswa lweshishini loKhankatho
Inxkaso nokwakhiwa kolutsha
Uphuhliso lwabanengxaki neziyobisi
Ubiyozo nowiso-ntetho lwelifa lemveli
5.) Apha kwezi zilandelayo yeyiphi eyona idinga ukuphuhliswa? [Unga khetha zibe ntathu] *
Emlotheni Memorial Park
Other, please add your suggestions
6.) IMBDA isando kuphuhlisa istalato iSingaphi, apha eNew Brighton. Ucinga ukuba iye yayimpumelelo? *
Khetha ibe nye	Iye yayimpumelelo	Bazamile	Khange ibe nafuthe
7.) Sicela wandise ucacicse le mpendulo yakho ingentla *
8.) Sicela udwelise indawo ezibalulekileyo, indawo ezibaliweyo ngokwembali, indawo zekcubeko nelifa lemveli ezibaluleke kuwe apha eNew Brighton. *
9.) Ukuba ungasicebisa usixelele ngeprojekthi ejolise kwezoshishino okanye enxulumene nophuliso, ungacebisa uthini? *
10.) Ukuba unokucebisa ngophulo (olujongene nococeko, uphuhliso, ukuseleko, ukwakhiwa kwezakhono noqeqeshwa kolutsha) ungathini? *